Trump iyo Kim Jong oo uu usoo dhamaaday kulan aan wax heshiis ah kasoo bixin. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Trump iyo Kim Jong oo uu usoo dhamaaday kulan aan wax heshiis ah kasoo bixin.
Last updated Feb 28, 2019 950 0
Caasimadda wadanka Vitnam waxaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay kulan kulahaa madaxweynayaasha Maraykanka Donald Trump iyo kan Kuuriyada wuqooyi ninka lagu magacaabo Kim Jing On.
Labada madaxweyne waxay kawada hadlayeen arinta nucearka ee Kuuriyada Wuqooyi, waxaana inkastoo ay sheegeen in kulanku ahaa mid wanaagsan, hadana jirin wax natiijo ah oo kasoo baxay.
Madaxweyaha Maraykanka Donald Trump oo hadlay waxa uu sheegay ineysan deg deg ku heynin in la gaaro heshiis, balse uu aad u daneynayo in wadahadallada dalkiisa uu kula jiro Kuuriyada wuqooyi noqdaan kuwa mira dhal ah.
Kim Jing On oo isna hadlay, wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay inuu kala furfuro warshadaha hubka nuclearka soo saara, iyo in Washington xafiis ka furato caasimadda Kuuriyada-wuqooyi.
Inkastoo warbaahinta caalamka ay aad isha ugu heysay kulanka labada madaxweyne, hadana markii lagu dhawaaqay inuu soo gebe-geboobay isagoo aan wax natiijo ah kasoo bixin, waxaa rajo xumo muujiyay siyaasiyiin badan.
Aqalka looga arimiyo Maraykanka ayaa war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in labada madaxweyne ay aad u amaaneen qaabka uu kulanka u dhacay, ayna rajeynayaan in mustaqbalka dhow la gaaro heshiis rasmi ah.
Kim Jing On iyo Trump ayaa la xusuustaa hadallo goodis ah oo ay hawada isku dhaafsan jireen, intii ay jirtay xiisadda nucelearka ee labada dal, waxaana hanjabadaas ay markii dambe isku bedeshay iney wada hadlaan oo ay kulmaan.